भूकम्पको जोखिम कुन भेगमा कति ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
सन्दर्भ : राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस २०७७
नेपालको सन्दर्भमा पूर्वीभन्दा मध्य र पश्चिम भेगमा तुलनात्मक रूपमा भूकम्पको जोखिम उच्च भन्न सकिन्छ ।
माघ २, २०७७ शिव सुवेदी
नेपाल भौगर्भिक अवस्थाले भूकम्पको उच्च जोखिममा भएको देश हो । हुन त पूरै हिमालयको क्षेत्रमा भएका देशहरूमा भूकम्पको जोखिम छ । वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) मा गएको ७.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प र यसको परकम्पनले करिब नौ हजारको ज्यान लियो भने देशको जीडीपीको आधाजसो क्षति गरायो ।
पृथ्वीमुनिका प्लेटहरूको चालका कारणले जम्मा भएको शक्ति पृथ्वीको सतहतिर आउने प्रक्रियालाई नै भूकम्प भनिन्छ । अर्को अर्थमा भूकम्प पृथ्वीमुनिको शक्ति निष्कासन गर्ने प्रक्रिया हो । कुनै देश वा क्षेत्रमा कत्तिको ठूलो र कति नियमित रूपमा भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा उक्त क्षेत्रमा भएका टेक्टोनिक्स प्लेटहरूको गतिमा भर पर्दछ ।
नेपालमुनिको इन्डियन प्लेट हरेक वर्ष १८–२० सेन्टिमिटरका दरले तिब्बतियन प्लेटमुनि घुस्नु नै नेपाल र वरपरको क्षेत्रमा भूकम्प जानुको मुख्य कारण हो । विश्वमा भूकम्पमापक यन्त्र (सेस्मोमिटर) को प्रयोग हुन थालेको सन् १९६० को दशकबाट हो तर भूकम्प त्यसभन्दा पहिला पनि गइरहेकै थियो । भूकम्पमापक यन्त्रको आविष्कार हुनुअगाडिका भूकम्पलाई ऐतिहासिक भूकम्प भनिन्छ । ऐतिहासिक भूकम्पको बारेमा अध्ययन गर्न पुराना लेख, शिलालेख तथा सोही समयमा लेखिएका र पछि भेटिएका प्रमाणहरूलाई आधार मानिन्छ । नेपालमा अब ठूलो भूकम्प कैले जान्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनका लागि नेपाललाई तीन भागमा विभाजन गर्न आवश्यक देखिन्छ– पूर्वी, मध्य र पश्चिम नेपाल ।
कुनै ठाउँमा अब भूकम्प कैले जान्छ भनेर जान्नुअघि उक्त क्षेत्रमा इतिहासमा कुन म्याग्नेच्युडको भूकम्प कैले गएको थियो भन्ने जान्नु अनिवार्य छ । पूर्वी नेपालमा वि. सं. १९९० (सन् १९३४) मा ८ म्याग्नेच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प गएको थियो जसलाई प्रमाणित गर्ने धेरै वैज्ञानिक आधारहरू भेटिएका छन् । पूर्वी नेपालभन्दा पूर्व सिक्किम हुँदै भुटानसम्मको भौगर्भिक अवस्थाले पनि भविष्यमा पूर्वी नेपालमा जान सक्ने भूकम्पलाई असर गर्न सक्छ । पूर्वी नेपालभन्दा पूर्व सन् १८९७ मा भुटानमा ठूलो भूकम्प गएको थियो । सन् १९३४ को भूकम्पले जमिनमुनिको शक्ति जमिनको सतहसम्मै ल्याएको केही अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसरी हेर्दा १९३४ को भूकम्पभन्दा पूर्वको क्षेत्रमा भुटानसम्म करिब सय वर्षको अन्तरालमा ठूला भूकम्प रेकर्ड गरिएको छैन । यसले उक्त क्षेत्रमा ठूला भूकम्पको जोखिम उच्च छ भन्ने देखाउँछ । पूर्वी नेपालमा सन् १९३४ को ८.२ म्याग्नेच्युडको भूकम्पपछि सोही वा सो बराबरको भूकम्प आउन ३०० देखि ५०० वर्षसम्म लाग्छ भन्ने केही अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसो भन्दै गर्दा पूर्वी नेपालको सयौं वर्षसम्म शक्ति निष्कासन नभएको भागले अर्को ८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
मध्य नेपाल देशभरिमै तुलनात्मक रूपमा धेरै भूकम्प रेकर्ड गरिएको भाग हो । सन् १२५५ मा तत्कालीन राजा अभय मल्लको मृत्यु भूकम्पका कारणले भएको केही रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । सन् १२५५ पछि २०१५ सम्ममा यो क्षेत्रमा ७ वटा ७ भन्दा बढी म्याग्नेच्युडका भूकम्प गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । मध्य नेपालमा वि. सं. २०७२ भन्दा पहिला सन् १८६६, १८३३, १८१० मा पनि केही ठूला भूकम्प रेकर्ड गरिएका थिए । २०७२ को भूकम्पको दरार जमिनको सतहसम्म आएको देखिएन जुन कुराले मध्य नेपाल र काठमाडौंमुनिको शक्ति पूर्ण रूपमा ननिस्किएको प्रमाणित गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पूरै शक्ति जमिनमा निस्कन कि ठूलो भूकम्प जानुपर्छ कि साना भूकम्प धेरै जान पर्छ । तर केही अध्ययनले हजारौं साना भूकम्पले निष्कासन गर्ने शक्ति नगण्य मात्रामा मात्र हुने र ठूलो भूकम्पको जोखिम नघट्ने देखाएका छन् । त्यसैले काठमाडौंवरिपरि ठूलो भूकम्पको जोखिम अझै रहेको भन्न सकिन्छ । विगतमा गएका भूकम्पका ढाँचा र वि.सं. २०७२ को भूकम्पले जमिनमुनिको शक्ति जमिनको सतहसम्म नल्याएका कारणले मध्य नेपाल उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ ।
सन् १५०५ मा मुस्ताङमा गएको ठूलो भूकम्पका कारणले तिब्बतका राजाको मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण भेटिएको हुँदा पश्चिम नेपालमा गएको पछिल्लो ठूलो भूकम्प त्यही नै रहेको आजसम्मको बुझाइ छ । यसको मतलब ५ सय वर्षभन्दा धेरै समयदेखि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको छैन । इन्डियन प्लेट तिब्बतियन प्लेटको मुनि घुस्रिने दर समग्र हिमालयन क्षेत्रमा उस्तै–उस्तै छ । प्लेटको गतिको कारणले जमिनमुनि जम्मा हुने शक्तिको परिमाण पनि करिब बराबर नै हुनुपर्छ । यसको अर्थ पश्चिम नेपालमा जुनसुकै बेला पनि ८ भन्दा ठूलो भूकम्पको जोखिम छ जुन कुरा धेरै अध्ययनले भनिसकेका पनि छन् । भूकम्पको अध्ययन गर्ने अर्को कुरा सेस्मिक साइकल ( भूकम्पीय चक्र) हो । भूकम्पीय चक्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि सन् १५०५ को भूकम्प दोहोरिने समय ३००–५०० वर्ष हामीले पार गरिसक्यौं । पश्चिम नेपाल गोर्खादेखि पश्चिम धनगढीसम्मको जमिनमुनिको अवस्था राम्रोसँग पत्ता लगाउन नसकिएका कारणले पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प जाँदा त्यसको दरार कहाँसम्म जान्छ वा दरारलाई केले रोक्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
(सुवेदी स्विजरल्यान्डको लुजान विश्वविद्यालयमा पोस्ट–डक्टरल वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन् ।)
प्रकाशित : माघ २, २०७७ १३:५४